"10 Jahre Garantie für Fake Breitling" - The Kasaan Times
Qala IJamani Journal Tenerife Iminyaka eyi-10 iwaranti ye-Fake Breitling "
Iminyaka eyi-10 iwaranti ye-Fake Breitling "
28. Meyi 2017
Abafama bamaRafethi kwii-Canaries
Njalo enkonzweni yakho ngokungekho mthethweni
(Santa Cruz) moya, umqhubi tekisi leyo akukho nomqhubi, kodwa wamnikela ngenxa yomboko yakhe Costa del Silencio- kwenye Nebenstraßen- impahla ukuba i "abathubelezisa 'ezininzi ukusuka imali cashed ukusuka. iiphakheji ezininzi zokuqhubela batshintsha izandla.
Umthengisi jikelele we-wholesale round Breitling kunye nomqhubi,
I-copyright ngabavakalisi beendaba be-kasaan, i-2017
Kule maphakheji: Ukufakela iifake, ukulinganisa kwe-Rolex kunye nezinye izinto eziphathekayo kwimveliso yembatho. Iimpahla zenzeke ngokukhawuleza, zigwebe ngeebhokisi, ukusuka kwindlu yangasese yaseChina. Phakathi kwezilwanyana zokubhinqa zincinci ezinokutshixa ivule yomthengi ongenakuzibonela kwaye ngokukhawuleza zibangele amanxeba anzulu kwaye aphephe kakhulu. Iindleko zokuhlawula i-149 Euro. Ibango lomthengisi ukuba lifumene iimpahla kwi-Swiss watch manufacturer. B Thengisa iimpahla okanye iimpahla ezindala, uthi, ukubonisa isitolo sakhe esiswini esigcwele ama-counterfeits. Kukho isitifiketi soqinisekiso senkohlakalo evela eBreitling. Inkampu. Iwaranti yeminyaka elishumi kwi-watch yexabiso elincinci, elingaba sisongelo, lithembisa umthengisi, ogcinwa ngumphathi wesitrato. Kakade, akukho nto iyenjalo.
Umthengisi wokuhlambalala uhlala etafileni
Zonke iikopi ezenziwe ngabashicileli beendaba be-kasaan, i-2017
Ezi ndaba ngokuqinisekileyo aziyi kukubonga ababukeli beSwitzerland.
Okwangoku, abathengisi abahamba ngeenqanawa kwiiCanary Islands bakhukula izitrato kunye namabhendi aneebhokisi ezizele i-Breitling fakes.
Abakhenkethi baxwayiswa. Akhona nje ngenxa yengozi enkulu yokulimala, kodwa iziphathamandla zithintela abahwebi baseAfrika ukuba bathuthuzele. Ivenkile kwiziqithi zakhalaza malunga nokuthengwa kweentengiso. Leyo ndlela yenziwe ngayo iinyanga. Ubani obanjwe ngewashi enjalo akumele amangaliswe xa ehlawula izigwebo ezinkulu, iwashi ithathwa. Okufanayo kuya "i-Lacoste" iikhati kunye neengxowa zeCalvin Klein kunye nezibuko zelanga.
Mhlawumbi, ngokubhekiselele kwi-insider, iilindi zihlaliswe ngamanqanawa, iAfrika ayikude. Njengoko iziyobisi ziza kwii-Canary, utsho.
Ukuhlolwa okuninzi kuye kwenzeke kwiinyanga ezimbalwa nje, kodwa umkhukula weefowuni zefakeli kunye namawashi awafuni ukuwaphula, kwaye amapolisa ahlala ehlutha impahla. Kodwa abathengisi bavela kwiivenkile neevenkile.
Enye ingxaki, ngokukodwa kubakhenkethi, ngaba iteksi engekho mthethweni, umntu unokucebisa kuphela umntu ukuba asebenzise isithuthi esinjalo, esingenakuqinisekiswa kwaye sivunyiwe. Abaqhubi banzima kwaye banomsindo. Isongela apha nabakhenkethi kwaye ibonise iilayisenisi ezingekho ngetekisi.
Abantu baseAfrika babanjwe kwiindawo ezizimeleyo, abanye babo ababaleki, kufuneka bahlawule abathungisi ngokuthengisa izinto.
Abo bangathengiyo baxhatshazwa ngokugqithiseleyo okanye besetyenziswe kakubi. Abathengisi abahamba ngeenqwelo ezinobandezelo bangaphantsi koxinzelelo, ungazivakalelwa yonke indawo.
"Ingxaki inokuthi ikwazi ukuba yinto enhle, ukuba ngabaphathi baseCanary Islands baqhekeke," kusho umthengisi kwaye mhlawumbi ulungile.
Isiqendu esilandelayo: Loveboys kunye ne-Wrong Rolex
Prague - ikhefu le-3 ikhefu elifutshane kwi-2 abantu kwisixeko sasePrague, kuquka ukutya kwasekuseni
Yithenge ngoku kuphela: EUR 49,00
I-Volcano Teide iqhutywe ngokukhawuleza eTenerife
Abantu banokuphatha njani izilwanyana ezifana nale?
Umongameli wangaphambili waseCatalan waseCarles Puigdemont ubanjwe eJamani
Inqaku langaphambiliIPetet 9
Inqaku elilandelayoGröpelingen depot
Ukubulala okungaqhelekanga kwiCosta Adeje - Tenerife
Franco kunye nokuzimela kweTenerife